Saylicipress.net - Awdal: The Land of Ahmed Guray: Xaalkeennu Waa CAADDA.
Xaalkeennu Waa CAADDA.
“Dhacdadii u dambeysay markii askar beeleedkii shaadh ka S/land sidatey iyo beelihii dhulbalaadhsigii la jabiyey in Hargeysa laga soo direy ciidamo. Kuwaas oo loo qaatey ciidamo dhexdhaxaad ah laakiin si kidis ah ragbadan nooga laayey, Waana godob aan u hayno mamulka S/land gaar ahaan ina Rayaale. Waxaanan balanqaadeynaa cidkasta oo na dulmida in aan wakhtigeeda la sugayno in aan la'xisabtano”.
War murtiyeedkaasi wuxu kasoo baxay beesha Bahabar Muuse (Samarroon); oo ka mid ah beelaha ugu miisaanka weyn Samaroon oo ka hadlayay xaalada Degaanka Caadda ee Gabiley. Bahabar Muuse, waa Beel xaddaarad qadiimi ah ku fadhida, lehna dulqaad aad u weyn oo an marnaba ku horreynin daandaansiga. Waana beel hadii dul qaadkaas laga far marooojiyo oo la daandaansado, la hubo inay naftooda hurayaan, sida Libaaxdana u dagaalammi doonaan (Allaha sahlo Libaax seexday, niman salaaxeene). Isla markaana la hubo inay heli doonaan taageerada Beelaha Samaroon oo dhan.
Hadaba guurtida u xilka Qaran ka saaran yahay xasiloonida Somaliland, si loo kala badbaadiyo dagaal weyne dhex mara Samarroon iyo Isaaq, oo keeni doona dhammaanshaha Somaliland . Waxay ila tahay in sida ugu dhakhso badan loogu soo celiyo beesha Bahabar Muuse, xaqooda ka maqan, ee marna shaadh dawladeed loogu soo qaadanayo, marna shaadh shicib loogu soo qaadanayo. Raga laga laayayna, cidii laysay halla soo taago sharciga oo amma halla dilo ama deg-deg ha loo bixiyo magtooda iyo xaalkooda, oo toban laab ah.
Madaxweyne Daahirna waxan odhan lahaa SHAME ON YOU: Bahabar celi ayaad ciidan Ciisa ah ku dul haysaa dhulkoodiina laga sii durkinayaa, oo ceelashii iyo beerihii adeeraday ayaad ku haysaa cidhiidhi. Bahabar Muusana waxad ku dul haysaa ciidan Jibriil Abokor ah oo maalin walba xaalkoodu kusii socda xaalada Falastiin. Awdal oo dhan ayaa noqon doonta Falastiin, haddii ad sidaas wax ka badali weydana, taariikhda Awdal, meel xun iyo baal mugdi ah ayaad ka gali doontaa. Lagama yaabo inaad maanta noo baahantahay, waxanse kuugu bishaaraynayaa inaad noo baahandoonto, kuna danbayn doonto sida odaygii yidhi: “maantoo an talo hayo, tamar ma hayo, maalintaan tamarta hayayna, talo ma haynin.
Haddal iyo dhammaan; gudida xidhiidhka ee Beesha Bahabar Muuse, baaqooda waxay ku soo gaba-gabeeyeen sidan: "Haddaba dhamaan Golayaasha iyo muwaadiniinta jecel nabadda iyo cadaalada waxaan ugu baaqaynaa in ay arrinta CAADDA wax ka qabtaan intay goori goortahay.Waxaanan caddeynaynaa haddi xalkale oo caddaalada la waayo in aan dhulkayaga udhimanayno annagoo mabsuuda". Xaqiiq waa ay u dhiman doonaan dhulkooda iyagoo mabsuuda ah waana ka dhab, waana Bahabar Muuse.
Sidaa daraadeed ballanteena iyo Xaalkeenu Waa CAADDA.
Posted by Bahwaynta Saylici at 4:31 PM
Guubaabo - Elmi Ahmed (Montecarlo)
Ergo l - Markii Arimuhu Gadhaan Casaan; By Omer fa...
Mogadishu landmine blast kills Somali official
Somali town captured by Islamist fighters
The Fall of Mogadishu – A Black Day in Somali History
Portland Rally Held To Protest Genocide In Somalia
Imperialist hypocrisy and Ethiopian crimes in Ogaden
Iran, Djibouti discuss relations
Iran ready to implement economic projects in Djibo...
ETHIOPIA: Meles Zenawi’s TPLF’s 30 Year History of...
Somalia: One Year after TPLF Invasion - Part IV
Xisaabta Mar ii soo Celi.
Somalia festers in chaos one year after Ethiopian ...
Two Foreign Aid Workers Seized in Northern Somalia
Somalia: We Will Reach International Border, Says ...
Gabaygii Salal - hiildan
Somalia is on fire again
Somali refugees find a haven in Shelbyville
Somali President phones President Saleh on Somali ...
Somali gov't official accuses UN of 'unbalanced' r...